"Campos de Castilla", masterpiece nke Antonio Machado | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nyocha nke «Campos de Castilla»
"Campos de Castilla" Ọ bụ ọrụ a kacha mara amara nke onye na-ede uri na Sevillian bụ Antonio Machado ma e bipụtara ya na 1912, ọ bụ ezie na emesịrị gbasaa ya afọ ise ka nke ahụ gasịrị, na 1917. N'ime ọrụ a ihe onyonyo ahụ dị adị karịa ma bụrụ ihe atụ karịa akwụkwọ ndị gara aga nke a Onye edemede na ala dị iche iche na-ekwu ọtụtụ ihe banyere onye edemede ahụ n'onwe ya, agbụrụ mmadụ n'ozuzu ya na akụkọ ihe mere eme nke Spain.
N'ezie, mbibi nke mba ọ na-eche na onye edemede na-atụgharị uche nkọwa ụfọdụ ebe ma ọ bụ ọbụna nke àgwà nke ụfọdụ ndị. Ihe omimi nke ndu ma obu nkwenye okpukpe bu ihe ndi ozo n'ime akwukwo miri emi nke Machado kpughere nkpuru obi ya ikpughe ihe nile na-echegbu ma obu na-akpagbu ya n'uzo doro anya.
Ọnwụ nke onye ọ hụrụ n’anya Eleanor a na-enwe mmetụta ya na asaa nke uri mejupụtara akwụkwọ ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, ịdị iche na echiche dị iche iche na-eweta ọmarịcha akara na amamịghe puns ndị a na-anọchi anya ya karịsịa na "ilu". "Ilu na abụ" a dịkarịrị nso na nkà ihe ọmụma ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ n'ihe gbasara ịdị mkpụmkpụ na ịdị akọ, mgbe ụfọdụ na-echetara anyị abụ Japan na Japan.
Ọzọkwa n'ime akwụkwọ ahụ, e nwere ịhụnanya zuru oke a na-akpọ "Ala nke Alvargonzález", banyere ọdịdị akụkọ nke egosiputara nhụsianya nke mmadụ, na akụkọ nke oké ọchịchọ na anyaukwu na-adịghị aghọta òtù ụmụnna.
N'ikpeazụ anyị ga-ekwu na mgbakwunye n'okporo ụzọ, osimiri na oké osimiri abụọ bụ isi akara nke ọrụ, ịbụ ndụ osimiri na oke osimiri nwere otu ihe zuru oke na nke a na-akparaghị ókè n'ihe ụfọdụ ndị nkatọ kwenyere na ha ga-ahụ onye Chineke bụ.
1 Ọnọdụ nke Campos de Castilla
2 Kedu ka Antonio Machado Campos de Castilla si dee
3 Ihe odide nke Campos de Castilla
3.6 Ughtersmụ ndị ọgọ
4 Kedu ihe onye edemede ahụ chọrọ ịkọwa dị ka mmechi?
5 Kedu ihe kpatara ị ga - eji gụọ Campos de Castilla
Ọnọdụ nke Campos de Castilla
Ọnọdụ nke ọrụ Campos de Castilla na-eme na Castilla, ọkachasị n'otu obodo nta, Vinuesa na Muedra, nke dị nso na Cidones. N’ezie, ọ dị ọtụtụ obodo akpọrọ aha, ọkachasị nwanne nwoke nke tọrọ bụ onye gafere ụwa wee lawa. A maghị kpọmkwem oge akụkọ a mere, mana ọ na-enye anyị akụkụ akụkọ mere eme ebe o bi dabere na nrubeisi, omenala na ndụ mgbanwe. N'ime ya, nsọpụrụ na nsọpụrụ bụ mmetụta abụọ dị oke mkpa nke na-akọwa ndị mmadụ.
Na mgbakwunye, onye ode akwụkwọ na-atụ aro na nkwupụta okwu ma ọ bụ mkparịta ụka ha na ụmụ nwanyị ha nwere ike imetụta omume ụmụ nwoke, yabụ enwere obi abụọ banyere onye n'echeghị echiche ịkwụsị nna nna.
N’akụkọ ihe mere eme nile, ihe omume nke mere n’ụzọ ụfọdụ na-agbanwe ndị odide ahụ n’egwuregwu ahụ, na-akpụzi ụzọ ha si bụrụ ma na-emegharị ihe ha meworo.
Kedu ka Antonio Machado Campos de Castilla si dee
E dere Campos de Castilla na onye nke atọ. O nwere onye nkọwa ya bụ onye na-akọ akụkọ ahụ na-enyeghị echiche ọ bụla ma ọ bụ mmetụta ọ bụla banyere ihe na-eme, ọ bụ ezie na mgbe a tụleghachiri ihe ọ dere, ọ na-ekwupụta ihe ọ na-eche na ụzọ mkpuchi.
Ahịrịokwu ndị ahụ dị mkpụmkpụ ma bụrụ ndị a zụlitere n'ụzọ nkịtị. Ewezuga nkọwa, ihe ọ bụla na-achọ ikwu ọtụtụ okwu na obere okwu. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ ọrụ na amaokwu, ya mere, ọ ga-achịkwa metric nke romance.
Na mbu, nkata nke akụkọ a na-atọ ụtọ ma dịkwa ngwa, mana onye edemede ahụ mere ya iji wee gbuo ọchụ ahụ ebe ọ bụ na, site ebe ahụ, ọrụ niile gbadoro anya na igbu ọchụ ahụ na nsonaazụ ọ nwere maka ndị edemede ahụ.
Banyere ọrụ ahụ, a na-ekewa ya na ngalaba 10, nke ọ bụla akpọrọ n'ụzọ na-eje ozi dị ka ihe mmalite iji gwa ihe a ga-akọ na nke ọ bụla n'ime ha.
Ihe odide nke Campos de Castilla
Ọrụ nke Antonio Machado Ọ dị mkpụmkpụ, agbanyeghị, nke a anaghị egbochi na enwere ọtụtụ mkpụrụedemede kwesịrị ịrịba ama yana ọ dị mfe ịmara, ọ bụghị naanị na ọkwa anụ ahụ (ihe na-anaghị akọwa oke), mana karịa n'ime, ịmata ihe akpali onye ọ bụla.
Ya mere, n'etiti ha bụ:
Obi abụọ adịghị ya na onye a bụ onye mbụ na-arụ ọrụ, bụrụkwa nna nke ndị ọzọ. Ọ pụtaghị na ọ pụtara naanị na nke mbụ, mana na ọ pụtakwara na akụkụ nke abụọ, mana n'ụzọ mmụọ ma ọ bụ ọbụna n'ụzọ mmụọ.
Àgwà nke onye edemede ahụ nyere Alvargonzález bụ nke a nwoke na-achọ ime ihe niile enwere ike ka ezinụlọ ya wee dị mma na adịghị atụ ihe ọ bụla. Maka ya, ezinụlọ bụ ihe kachasị mkpa. Na mgbakwunye, anyị na-ekwu maka onye na-akwụwa aka ọtọ na ịhụ n'anya nke aka ya.
Nwunye Alvargonzález enweghị ọrụ nnọchi anya na Campos de Catilla, mana ọ ka nke abụọ. Na mgbakwunye, ka akụkọ a na-aga n’ihu, ọ bụ ezie na a na-ahụ ya n’oge dị iche iche, nke bụ eziokwu bụ na onye ode akwụkwọ na-agbakwunye ya na a iru uju n'ihi ọnwụ di ya e gburu.
N'ezie, a pụkwara ịhụ nke a n'ụzọ ọzọ, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na tupu anyị ekwuo na Alvargonzález bụ nwoke na-enye ihe niile maka ezinụlọ ya, ma nwee ịhụnanya, eziokwu ahụ na nwunye ya tụfuru nwekwara ike ịkọwa ya na ọ funahụrụ nzube nke ndụ ya, nye onye ọ hụrụ n'anya ma hụ ya n'anya nke ukwuu, onye na-amaghị etu esi aga n'ihu na-enweghị ya.
Juan bụ ọkpara, ọkpara. Mana ọzọkwa otu n’ime ndị gburu nna ya. N'agbanyeghi ihunanya nke a nyere ya, onye ode akwukwo a gosiputara udiri agwa nke onye na adighi enwe mmetuta mbu. Ọ na-ekwu okwu banyere ya na-akọwa ya site na isi mkpọtụ na obere ụkpụrụ omume.
N'akụkọ ihe mere eme nile, agwa a na-ata ahụhụ obi ọjọọ ya, n'ụzọ ụfọdụ Antonio Machado duru ya gaa n'okwu a "onye ọ bụla mere ya, kwụọ ụgwọ maka ya."
Ọ bụ nwa nwoke nke abụọ nke Alvargonzález, na onye ọzọ gburu ọchụ nna ya. Ọzọkwa, Machado gosipụtara agwa "jọrọ njọ" onye ị na-enweghị ọmịiko kama ọ na-enyo gị enyo. N'inwe anya na-enweghị isi na omume rụrụ arụ, ọ nwere otu ngwụcha dị ka nke gara aga.
Miguel bụ ọdụdụ nwa n’ezinụlọ. Ruo oge ahụ, ya na ha ebikọbeghị mana, mgbe anyị kwurịtachara banyere ọdịnihu ya, ebe ọ bụ na ọ chọghị ịbụ onye mọnk, ọ hapụrụ ụlọ. Mgbe ọ laghachiri, ihe na-aga n'ihu.
Ughtersmụ ndị ọgọ
N'ime ọrụ a, ndị nwunye nke ụmụ nwere ụfọdụ mkpaMa ha bụ naanị ngwa nwere otu ụdị ndị di ha ji. N'ezie, onye ode akwụkwọ anaghị enye ha nnukwu olu ma ọ bụ ịtụ vootu.
Kedu ihe onye edemede ahụ chọrọ ịkọwa dị ka mmechi?
Campos de Castilla abụghị naanị egwuregwu a na-agwa mmadụ igbu ọchụ. Ọ na-ekwu maka akụkọ nke etiti ya bụ igbu ọchụ, kamakwa na enwere ikpe ziri ezi nke Chineke, ya bụ, ọ bụrụ na mmadụ emee ihe ọjọọ, n'oge na-adịghị anya, ntaramahụhụ ga-adịrị ya.
Ya mere, anyị nwere ike ikwu na Campos de Castilla bụ ihe atụ nke ahịrịokwu a na-ahụkarị «onye na-eme ya, na-akwụ ya», ebe mgbe igbu ọchụ, ndị na-egbu onwe ha na-ejedebe ọgwụ nke ha ebe ọ bụ na ha enwetaghị ihe ha chọrọ na mbụ.
Otú ọ dị, ọ bụghị nanị na Machado na-elekwasị anya n'okwu a, kamakwa ọ na-ekwu maka ndị ọzọ, n'ụzọ nwere ike ikpuchi karịa, dịka "ọrịa ịhụnanya" nke nne nke, mgbe di ya nwụrụ, wutere ya; ma ọ bụ anyaụfụ na ekworo nke ụmụaka na-akpalite igbu nna ya.
Ọbụna na njedebe, onye edemede kwuo banyere ụta maka ihe ha mere.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji gụọ Campos de Castilla
Campos de Castilla bụ akwụkwọ na-agba mbọ kọwaa otú ụdị omume ọ bụla, nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ, si pụta. Ihe kasị dị ịtụnanya bụ igbu ọchụ nke nna n'aka ụmụ ya, na otu esi "egbu ikpe" n'ikpeazụ site na "ikpe ziri ezi nke Chineke."
Agbanyeghị, amatabeghị etu akụkọ nke ọdụdụ nwa nwoke siri gbanwee. Ọ na-ahapụ ụlọ n'ihi na ọ chọrọ ịgbaso obi ya na nna ya kpebiri inye ya ihe nketa ya ime ihe ọ bụla ọ chọrọ. N'ihi ya, ọ na-aga ịhụ ụwa wee laghachi, ọ bụghị ogbenye, kama ọ na-enwe obi ụtọ ma baa ọgaranya na ọdịbendị na obi ụtọ. Yabụ, kwa omume ndị ahụ dị mma, nwere ụgwọ ọrụ ha n'akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Nyocha nke «Campos de Castilla»
Okechukwu josari dijo
Ọ dị m ka ọ kwesịrị inwe ntakịrị omimi karịa gbasara nyocha nke nchịkọta uri ndị na-apụ kpamkpam na Modernism iji mee ka ọgbọ nke '98 site na asụsụ dị mfe na idozi nsogbu na ihu ỌZỌ SPAIN
Zaghachi Sharly Josari